DIDIM-PANJAKANA MIRAKITRA NY FANDRINDRANA, FAMPANDEHANANA ARY ANDRAIKITRY NY FILANKEVI-PIRENENA MOMBA NY FANABEAZANA - Ministère de l'Education Nationale
anafoanana ny didim-panjakana laharana faha-2010-0238 tamin’ny 20 aprily 2010 ary fandrindrana, fampandehanana ary andraikitry ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana.
NY PRAIMINISTRA, LEHIBEN’NY GOVERNEMANTA,p.i
Araka ny Lalampanorenana ;
Araka ny lalàna laharana faha-2004-004 tamin’ny 26 jolay 2004 novana tamin’ny lalàna laharana faha-2008-011 tamin’ny 17 jolay 2008 anaovana ny sori-dalana ankapobe mifehy ny Fanabeazana sy Fampianarana ary Fanofanana eto Madagasikara ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2009-1172 tamin’ny 25 septambra 2009 mamaritra ny anjara raharahan’ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena ary koa ny fandaminana ankapobe ny Minisiterany;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2015-021 tamin’ny 14 janoary 2015 anendrena ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2015-030 tamin’ny 25 janoary 2015, anendrena ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2015-1243 tamin’ny 28 aogositra 2015, nampiandraiketana an’Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO, Minisi-panjakana miandraikitra ny tetikasan’ny Filoaham-pirenena, ny Fanajariana ny Tany sy ny Fampitaovana, ny Fisoloantena vonjy maika ny Lehiben’ny Governemanta;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2015-1250 tamin’ny 1septambra 2015, nampiandraiketana an’Andraiamatoa Joéli Valérien LALAHARISAINA, Minisitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Solitany, ny Fisoloantena vonjy maika ny Minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2015-1251 tamin’ny 1 septambra 2015, nampiandraiketana an’Andriamatoa Paul RABARY, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ny Fisoloantena vonjy maika ny Minisiteran’ny Tontolo iainana, ny ara-Ekolojika, ny Ranomasina ary ny Ala;
Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena;
Eo amin’ny Filankevitry ny Governementa,
Andininy voalohany – Atsangana eny anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny rantsa-mangaika fakan-kevitra antsoina hoeFilankevi-pirenena momba ny Fanabeazana.
Ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana dia manana iraka :
– manentana maharitra ny fiheverana ny ho avin’ny Fanabeazam-Pirenena ;
– mandray sy mandalina ireo soso-kevitra rehetra sy ireo tetikasa fanatsarana, fanitsiana ary fanavaozana mifandraika amin’izany ;
– mampiroborobosy manamora ny fifampiresahana maharitra eo amin’ireo solontenam-Paritra, ireo sokajin’asa momba ny fanabeazana ;
– mandamina sy mandrindra eo anivon’ny firenena ireo hetsika atao, manomboka amin’ny famolavolana ka hatramin’ny fanatanterahana ny politikam-pirenena momba ny fanabeazana ;
Amin’izany, dia atoniny izy ahafahany manomeny heviny mikasika izay tetikasa rehetra na tolo-dalana izay misy ifandraisany amin’ny ho avin’ny fanabeazana eto Madagasikara.
Ao anatin’ireo andraikiny, nyFilankevi-pirenena momba ny Fanabeazanadia tsy maintsy :
– mandray an-tanana ireo filan’ireo mpikatroka sy mpiasan’ny sampandraharam-panjakan’ny fanabeazana ;
– mihevitra ireo zava-misy, ireo mampiavaka ny isam-paritra sy isaka ny sokajin’asa, ary ihany koa ireo teritery mifandray amin’ny maha izy azy ny Malagasy.
NY AMIN’NY FANDAMINANA NY FILANKEVI-PIRENENA MOMBA NY FANABEAZANA
NY AMIN’NY FIRAFITRY NY FILANKEVI-PIRENENA MOMBA NY FANABEAZANA
Andininy 2 – Ny filoha sy ny filoha lefitry ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana dia fidian’ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra amin’ny alalan’ny fifidianana mivantana au scrutin uninominal majoritaire fihodinana tokanaho amin’ny fe-potoam-piasana 2 taona.
Ny filoha sy filoha lefitra dia azo averina fidiana indray mandeha.
Andininy 3 –Ny Sekretera Mpanatanteraka dia tendrena amin’ny alalan’ny fanapahana ataon’ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena. Mananany laharan’ny lehiben’ny sampandraharaha izy ary miankina amin’ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Andininy 4 –Ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazanadia ahitana farafahabetsany mpikambana 51 izay :
– solontena1 avy amin’ny Minisitera misahana ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Siantifika;
– solontena1 avy amin’ny Minisitera misahana ny Asa, ny Fampianarana Tekinika ary ny Fampiofanana arak’Asa;
– solontena1 avy amin’ny Akademia Malagasy ;
– solontena 3 avy amin’ny firaisamonim-pirenena;
– solontena 10 avy amin’ny nyfoibe nasionalin’ny sekoly tsy miankina solontenan’ny fampianarana tsy miankina sy tsy ara-pinoana ;
– solontena 14 avy amin’ny sendika mitsangana ara-dalana sy miara-miasa amin’ny Minisitera misahana ny Fanabeazam-pirenena ;
– solontena 15 avy amin’ny fikambanana “fédératives” mitsangana ara-dalana mikatroka eo amin’ny sehatry ny fanabeazana;
Andininy 5 –Izay olona rehetra, misehatra eo amin’ny sehatry ny fanabeazana na fantatra noho ny fahafaha-manaony manokana mikasika ny fanabeazana, dia azo tendrena amin’ny alalan’ny didim-pitondrana raisin’ny Minisitra misahana ny fanabeazam-pirenena mba ho isan’ny mpikambana feno eo anivon’ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazananefa tsy hihoatra ny fetr’isa 51 ireo mpikambana voalaza ao amin’ny andininy faha-4 etsy ambony.
Andininy 6 – Tendrena amin’ny alalan’ny didim-pitondrana avoakan’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, mandritra ny roa taona araka ny tolokevitry ny antokon-draharahana niaviany ireo mpikambana ao amin’ny Filankevitra.
NY AMIN’NY FAMPANADEHANANA NYFILANKEVI-PIRENENA MOMBA NY FANABEAZANA
Andininy 7 –Mivory ara-potoana indroa (2) isan-taona nyFilankevi-pirenena momba ny Fanabeazana. Azony atao ihany koa ny mivory tsy ara-potoana araka ny fangatahan’ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena.
Hamafisiny ireo fomba fomba fampandehanan-draharaha amin’ny alalan’ny fitsipika anaty ary azo atao ny manangana vaomieran’asa amin’ny alalan’ny fanapahana; misokatra ho an’ny rehetra afaka mitondra ny anjara birikiny ho amin’ny fiheverana ny Fanabeazam-pirenena.
Mandritra ny fotoam-pivorian’ny Filankevitra voalohany, dia tsy maintsy tanterahana, avy hatrany, araka ny fiantsoan’ny filohan’ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana, ao anatin’ny dimy ambin’ny folo (15) andro aorian’ny fitsanganan’ny Filankevitra ny fivoriana voalohany.
Andininy 8 – Mandritra ny fivoriana ara-potoana, ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana dia afaka mandinika ireo raharaha rehetra mikasika ny andraikiny. Ny lahadiniky ny fivoriana dia feran’ny Filohan’ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana amin’ny alalan’ny didim-pitondrana arakaraka ny zava-misy.
Mandritra ny fivoriana iray, ny lahadiniky ny fivoriana manaraka dia azo atolotra tsy miaraka amin’ireo teboka izay ho faritana miandalana mifandraika amin’ny toko II amin’ity didim-panjakana ity.
Andininy 9 –Mandritra ny fivorian’ny Filankevitra, ny mpitantsoratry ny fivoriana dia misahana ny fandrafetana ny fitanana an-tsoratra izay tsy maintsy vita farafahatarany48 ora aorian’ny fifaran’ny fivoriana.
Ny fitanana an-tsoratra ny fivoriana dia tsy maintsy ahitana ny lalàna feno mikasika ny teboka niadian-kevitra, tolokevitra sy/na hevitra neken’ny Filankevitra.
Ny fitanana an-tsoratra ireo fivorian’ny Filankevitra dia tahirizina araka ny fisesiny ao anatin’ny rejisitra tanan’ny mpitantsoratry ny Filankevitra ka ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena dia mahazo izany avy hatrany.
Andininy 10 –Ny Filankevitra dia mivory tsy ara-potoana, isaka ny takian’ny fitrangan-javatra lehibe mitaky izany.
Amin’izany, ny Filohan’ny Filankevitra dia miantso rehefa misy fangatahana aminy amin’ny alalan’ny lahadinika voafaritra tsara avy amin’ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena na avy amin’ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao aminy.
Andininy 11 –Ny Filohan’ny Filankevitra no manao ny fiantsoana fivoriana rehetra ao amin’ny Filankevitra. Tsy maintsy voasonian’ireo mpikamban’ny Filankevitra fito (7) andro katroka farafahakeliny, alohan’ny fivoriana, miaraka amin’ny lohahevitra atolotra hakana ny hevitry ny Filankevitra izany.
Mikasika ny fivoriana tsy ara-potoana indray, azo ovana io fe-potoana io nefa tsy mety ho latsaky ny iray andro katroka.
Andininy 12 –Tsy afaka manapaka ara-dalana nyFilankevi-pirenena momba ny Fanabeazana raha tsy eo anatrehan’ny maro anisa amin’ny mpikambana am-perinasa ao aminy manatrika ny fivoriana.
Na izany aza, raha tsy feno ny fetr’isa aorian’ny fiantsoana voalohany ara-dalana natao, ny fanapahana noraisina aorian’ny fiantsoana faharoa, elanelanin’ny telo (03) andro farafahakeliny, dia manan-kery na firy nafiry isan’ireo mpikambana tonga na voasolontena.
Andininy 13 – Ireo hevitra, tolokevitra sy fanapahana dia raisina araka ny maro anisa amin’ireo mpikambana tonga na voasolontena.
Raha mitovy ny isam-bato azo, ankoatra izay voalazan’ny fifidianana miafina voafaritry ny fitsipika anaty, dia izay omban’ny Filohan’ny Filankevitra no manan-danja.
Andininy 14 – Ny Filohan’ny Filankevi-pirenena ny Fanbeazana soloan’ny filoha lefiny no mitarika ny fivoriana.
Andininy 15 –Ny Filankevitra dia afaka manangana, eo anivony, ireo vaomieran’asa maharitra sy/navonjy maika mba handinika ireo lafin-javatra amin’ny endriny samihafa izay mahaliana ny Filankevitra.
Andininy 16 –Azo antsoina handray anjara amin’ireo asan’ireo vaomierahakan-kevitra :
1° ireo mpiasam-panjakana sy mpiasam-bahoaka izay mety ilaina ny heviny dia antsoina noho ny fahaiza-manaony;
2° vondrona rehetra mitsangana ara-dalana sy ireo mpandraharaha amin’ny sampandraharam-panjakana ao amin’ny fanabeazana, izay noho ny asany sy ny anjara asany na noho ny toe-javatra hafa ka afaka itondra ireo lafim-baovao manokana mety ilaina atolotra ny Filankevitra.
Andininy 17 –Ny isan’ireo vaomiera sy ireo mpikambana ao aminy, ny fomba fanendrena azy sy ny fitsipika fampandehanana azy dia faritana amin’ny alalan’ny fanapahan’ny Filankevitra.
Andininy 18 –Ny sekreteria mpanatanteraka dia ahitana ny sekretera mpanatanteraka sy sekretera roa.
Izy dia omen’ny Sekreteria Jeneralin’ny Minisitera misahana ny Fanabeazam-pirenena fitaovana fampandehanan-draharaha andavanandro arakaraka ny hoenti-manana eo aminy.
Izy dia miaraka amin’ny sekretera roa (02) izay manampy azy amin’ny fivorian’ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana tsy mandray anjara amin’ny adihevitra sy fifidianana. Izy no misahana nyfandrafetana ny fitanana an-tsoratra ny fivoriana.
Ny fitanana an-tsoratra ny fivoriana dia tsy maintsy ahitana ny lahatsoratra feno ireo hevitra, tolokevitra ary fanapahana neken’ny Filankevitra.
Ny fitanana an-tsoratra ireo fivorian’ny Filankevitra dia tahirizina araka ny fisesiny ao anatin’ny rejisitra voasonia miaraky ny Filohan’ny Filankevitra sy ny sekretera ka ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena dia mahazo izany avy hatrany.
NY AMIN’IREO ANDRAIKITRY NY BIRAON’NY FILANKEVITRA
Andininy 19 – Ny Filohan’ny Filankevitra no misahana ny fanomanana ny lahadiniky ny fivoriana.
Ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena dia afaka manolotra lafin-javatra ampidirina ao amin’ny lahadinika voafaritry ny Filohan’ny Filankevitra.
Ny Filohan’ny Filankevitra no miantoka ny fifandraisana tsy tapaka miaraka amin’ny Minisitera misahana ny Fanabeazam-pirenena izay ampahafantariny ireo asany amin’ny alalan’ny fampitana tatitra ara-potoana, dika mitovin’ny hevitra sy tolokevitra na tahirin-kevitra hafa mety ilaina.
NY AMIN’IREO FANAPAHAN’NYFILANKEVI-PIRENENA MOMBA NY FANABEAZANA
Andininy 20 – Rehefa mihaona amin’ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena ny Filankevitra dia manao fanehoan-kevitra izy. Rehefa mihaona amin’ny ampahatelon’ny mpikambana izy, dia mandray tolokevitra. Rehefa mandray fanapahana mifandray amin’ny asa sahaniny, na ny mifanohitra amin’izany, dia mandray fanapahana izy.
NY AMIN’IREO ANDRAIKITRY NY FILANKEVITRA
Andininy 21– Ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana dia misahana :
-mametra isan-taona ny fandaharan’asany sy ny sahanasany;
– eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, maneho ireo hevitra sy tolokevitra mikasika ny fampirotan-kevitra ankapobeny amin’ny politikam-panabeazana, izay atolony ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena;
– mitondra ny fanohanany ireo fampiharana vaovao izay mety hotsaraina ho zava-dehibe sy mendrika ampahafantarina eo amin’ny tontolon’ny rafi-panabeazana mba hampiroboroboana sy hanamafisana ireo zava-misy hampahomby io rafitra io;
– manentanaireo fiheverana miaraka amin’ireo tompon’andraikitry ny rafi-panabeazana, ireo mpikaroka manokana eo amin’ny fanabeazana, ireo solontenan’ny fikambanana sy sendika na hetsika ara-pedagojika, ireo manam-pahaizana manokana vahiny amin’ny fanabeazana;
– mametraka isa-taona eo amin’ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena ny tatitry ny asany, maneho ny fandinihany sy ny tolokeviny.
Andininy 22 – Ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana sy ireo mpikambana ao amin’ny birao dia tsy afaka manao fanapahana ara-pifandraisana imasom-bahoaka amin’ny anaran’ny Minisitera misahana ny Fanabeazam-pirenena, na amin’ny anaran’ny Filankevi-pirenena ny Fanabeazam-pirenena raha tsy nahazoana alalana ara-dalana, an-tsoratra sy avy amin’ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena.
NY AMIN’NY FANOMEZANA TAMBIN-KARAMA
Andininy 23 – Maimai-poana avokoa ny asa rehetra tanterahina eo anivon’ny Filankevi-pirenena momba ny Fanabeazana. Noho izany, ny saran’ny iraka sy ny fisoloan-tena dia manaraka ireo fepetra iombonana apetraky ny lalana manan-kery.
Andininy 24 –Raha ilaina dia hisy didim-pitondrana horaisin’ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena ho fampiharana ity didim-panjakana ity.
Andininy 25 –Foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha izay mifanohitra amin’ity didim-panjakana ity, indrindra ny didim-panjakana laharana faha-2010-0238 tamin’ny 20 aprily 2010.
Andininy 26 –Ny Minisitry ny Vola sy ny Teti-bola; ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena;ny Minisitry ny Asam-panjakana , sy ny Asa ary ny Lalàna Sosialy; ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Siantifika; ny Minisitry ny Asa, ny Fampianarana Tekinika ary ny Fampiofanana arak’Asa; ny Minisitry ny Tontolo iainana, ny ara-Ekolojika, ny Ranomasina ary ny Ala; ny Minisitry ny Rano, ny Fanadiovana ary ny Fahadiovana; ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asa tanana; no miandraikitra amin’izay tandrify azy avy, ny fanatanterahana ity Didim-panjakana ity izay hosoratana sy haely amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika.
Natao tao Antananarivo, ny 01 septambra 2015
Avy amin’ny Praiministra Lehiben’ny Governemanta p.i. RAKOTOVAO Rivo
Ny Minisitry ny Vola sy ny Teti-bola p.i. Ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena
RABARY Andrianiaina Paul Ny Minisitry ny Asam-panjakana , sy nyAsa ary
ny Lalàna SosialyNy Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Siantifika
RASOAZANANERA Marie Monique Ny Minisitry ny Asa, ny Fampianarana
Tekinika ary ny Fampiofanana arak’AsaNy Minisitry ny Tontolo iainana, ny ara-Ekolojika, ny Ranomasina ary ny Ala p.i.
RABARY Andrianiaina Paul Ny Minisitry ny Rano, ny Fanadiovana ary ny FahadiovanaNy Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asa tanana
NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
randriantsitohaina patrice emmanuel dit :
MBA mila NY kopian’io didim-panjakana laharana faha- 2015-1257 city izahay ato @ FLM AMBOHIMANDROSO GARA. Misaotra tompoko.
Afaka miantso ilay laharana maintso ianao dia hovoavaly izay tadiavinao tompoko.